Shirka Musharixiinta oo waqti dheeraad ah lagu daray | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaa lagu wadey Maanta in Shirka lasoo gaba-gabeeyo, islamarkaana laga soo saaro war-murtiyeed, balse dib loo dhigay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa waqti dheeraad ah lagu daray mudada uu soconayo Shirka Musharixiinta uga socda hotel-ka Jazeera, oo ku kulansan yihiin 14 musharax.
Daahir Maxamuud Geelle, oo kamid ah Musharixiinta oo inta badan warbaahinta siiya arrimaha Shirka ayaa sheegay in gogasha ay ballaariyeen, kuna casuumeen Culimada, Odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, Haweenka iyo qeybaha kale ee bulshadda.
Wuxuu xusay in Musharixiinta ay qaadanayaan doorkii uu gabay Farmaajo, ee ah badbaadinta iyo isku heynta dalka, islamarkaana ay ka shaqeynayaan inay qabsoonto doorasho loo dhan yahay, nabdoon, oo xor iyo xalaal ah.
Shirkan ayaa maanta galay maalintiisa 3aad, waxaana la filayaa inuu sii socdo maalmo kale, maadaama uu soo jiitay siyaasiyiin iyo Mas'uuliyiin kale oo dowladda katirsan oo ku biiraya, kadib markii ay arkeen inuusan Farmaajo meel wanaagsan u wadin dalka.
Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi, Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada Waqooyi ayaa maanta ka qeybgalay kulanka, iyagoo muujiyay inay taageersan yihiin diidamada mucaaradka ee gudiyadda doorashooyinka la musuq-maasuqay.
0 Comments Topics: doorashadda 2020 farmaajo madasha xisbiyada qaran mucaarad